Wasiir Janan oo Si lama Filaan ah uga hadlay Doorashada Laga Wareejiyay Garbahaareey
HomeWararka SomaliyaJubbalandWasiir Janan oo Si lama Filaan ah uga hadlay Doorashada Laga Wareejiyay Garbahaareey
April 15, 2022 Jubbaland, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa si lama filaan ah uga hadlay go’aankii uu guddiga doorashadad heer Federaal uu magaalada Ceelwaaq ugu wareejiyay doorashada kuraastii taalay magaalada Garbahaareey.
Janan ayaa go’aanka guddiga FEIT ku tilmaamay inuu yahay go’aan mudan in lasoo dhaweeyo maadaama uu kusoo aaday waqti loo baahnaa.
Cabdirashiid Janan ayaa sheegay in gobolka Gedo laga badbaadiyay inay ku dhacdo matalaaad la’aan, isagoo sheegay in guddiga doorashada uu qaatay go’aan wanaagsan oo Gedo looga saarayo jiitanka doorashada.
“Haddii Garbahaareey xoog lagu haysto oo madaxweyne ku-xigeenkii ku dhashay loo diidan yahay, hadduu Ceelwaaq imaan karo, oo madaxweynihii Jubaland imaan karo, oo guddigii doorashada Jubbaland imaan karo, in doorashada lagu qabto wax dhib ah uma arko. Taas waxaa ka xun inay ka haraan barlamaanka Soomaaliyeed, sida maantaba dhaarta uga hareen,” ayuu yiri Cabdirashiid Janan oo wareysi siiyay Idaacadda goobjoog.